TALOOYINKA UGU SARREEYA EE SAMEYNTA CABITAANKA IYO QUDAARTA - BEERAHA DIGAAGA
On khaanadaha dukaamada oo dhan ee waqtiyada kala duwan ee sanadka waxaad ka iibsan kartaa alaabta cusub.
Wax dhibaato ah ma jiri doonto iibinta hilibka digaaga.
Hase yeeshee, beeralayda ayaa waxay soo saaraan dhir kala duwan iyo xayawaan guri oo ku yaal suuqyadooda.
Dhammaantood waxay kuu sheegi doonaan in alaabta guriga-koray ay yihiin kuwo aad u fiican oo faa'iido badan ka dukaanka.
Dadka degaanka xagaaga magaaladu waxay haysan karaan beer yar, laakiin hadda beerista digaagga maaha mid qof waliba.
Laakiin gacmaheena xirfad leh si ay u abuuraan cabitaankooda ama nuujiyaha loogu talagalay digaagga ma aha mid aad u adag.
Waxyaabaha si habboon loo sameeyey waa mid ka mid ah hawlaha muhiimka ah ee digaaga taranka.
Sida laga soo xigtay calaamadaha astaamaha lagu kala saari karo iyo cabitaannada digaaga
Dukaamada waxaad ka arki kartaa noocyo kala duwan oo ah qudaarta digaaga, kuwaas oo ku yimaada midabyo kala duwan iyo cabbirro kala duwan. Hase yeeshee, shimbirtu waxay cuni kartaa quudinta naas-nuujinta.
Xannibaadaha gacmaha aad u jabaninta lagu iibsaday dukaanka, iyo sidoo kale wakhtiga lagu iibsanayo wax soo saarka noocan ah waa yar yahay.
Internetka waxaad ka heli kartaa siyaabo badan oo kala duwan ee wax soo saarka ee naas-nuujiyaha iyo cabitaanka. Qaar ka mid ah hababka iyo alaabta loo isticmaalo soo saaridooda, waxaad ka akhrisan doontaa maqaalkeena.
Qeybinta quudinta ee wax lagu isticmaalo:
Subaxdii koowaad waa alwaax. Cunto noocan oo kale ah ayaa loo isticmaali karaa quudinta digaaga oo lagu qalajiyo qalalan, tusaale ahaan: hadhuudh, cuncun isku dhafan, qaybo macdan oo kala duwan: naylcaal, madoow ama dhagaxyo.
Qaybaha labaad waa bir ah ama caag ah. Nafaqooyinka noocan oo kale ah waxaad ku ridi kartaa cunto qoyan. Ka dib markaa way fududaanayaan in la dhaqo.
Saddexaad waa seddex xabbadood oo mesho ama biro bir ah. Noocaan noocan ah wuxuu ku habboon yahay quudinta cagaarka cusub.
Qeybinta quudinta ee nooca quudinta:
Quudinta quudinta qaabka saxaarada.
Kaadida noocan oo kale ah waxay u ekaataa weel yar oo dabacsan, oo leh dhinacyo dhinaceeda ah, taas oo u adeegta in aan lagu faafin cuntada guriga digaaga. Noocaan noocan ah wuxuu ku habboon yahay quudinta digaagga yaryar.
Feeder ee qaab-qabad ah kaas oo lakabka ama xayiraadda xayiraadaha xayiraadaha ku xiran tahay saxanka.
Waxaa laga yaabaa in ay jiraan dhowr qaybood oo ku jira taangiga si ay u helaan dhawr nooc oo quudin ah. Cunnooyinka noocan oo kale ah ayaa la dhigayaa gadaashooda, taas oo si weyn u fududeyneysa dayactirka.
Cunnadeed oo qaab ah tuubo, sida quudinta ayaa loo sameeyaa si loogu quudiyo cuntada qalalan shimbiraha.
Noockan noocan ah wuxuu kuu sahlayaa inaad shaqeyso, tan iyo subaxdii sida mugga cuntada waxaa lagu shubay halkaas ilaa maalinta oo dhan. Markaas quudinta ayaa ka imanaysa tuubada ilaa saxanka, sida loo baahdo. Iyo naqshad farsamo ah oo la xiray, quudinta ayaa laga ilaaliyaa sunta kala duwan.
Sida loo kala saaro quudinta iyadoo loo eegayo booskooda qolka:
Marka ugu horeysa waa kuwa wax lagu karsado oo la dhigo dhulka. Cunnooyinka noocan oo kale ah ayaa badanaa loo isticmaalaa, maadaama ay u guuri karaan qayb ka mid ah guriga.
Qodobka labaad - xariggan, oo leh miisaan. Noocyada noocan oo kale ah waxaa lagu dhejiyaa dhinac kasta oo guriga ka mid ah, waxay ku xiran yihiin barxadda ama kuwa kale ee isku xiran.
Shuruudaha waa in la raaco wax soo saarista hoyga guriga
Shuruudda ugu horreysa ee la doonayo in la tixgeliyo waa inay hubiso isticmaalka saxda ah ee quudinta.
Qalabaynta waa in la sameeyaa habaabin sida shimbiruhu aan u fuuli karin, cuni karo cuntada, iyo xittaa khasaaro badan. Si looga hortago tani inay dhacdo, waa lagama maarmaan in la sameeyo bambooyin ku saabsan quudinta ama daboolida kale ee cuntooyinka intooda badan ee ku jira quudinta.
Shuruudda labaad ee la tixgeliyo waa sahlanaanta dayactirka.
Qalabkani waa inuu si joogta ah u buuxiyaa raashin, marmarna dhaqo nadiifna. Taas oo dhan, qaabka, qiyaasta iyo alaabtu ma aha inay abuuraan xaalado aan fiicneyn oo dhacdooyinkaas ah.
Sidaa daraadeed, soosaarista naas-nuujiyaha, waxaad u baahan tahay inaad ka fekerto dhamaan qodobbada muhiimka ah: cabbirada yaryar, sahlanaanta gacan qabashada, nadiifinta iyo jeermiska.
Shuruudda saddexaad ee loo baahan yahay in la tixgeliyo waa cabbirka ugu wanaagsan.
Waxaad ubaahantahay inaad sameysid quudin sida shimbiraha oo dhan ay wax uga cuni karaan. Qiyaas ahaan shan iyo toban mitir oo dherer ah ayaa loo baahan yahay digaag weyn, iyo digaagga laba jeer boos yar.
Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in shimbiraha daciifka ah ay sidoo kale heli karaan quudinta.
Qeexida habka waxsoosaarida wax soo saarka
Cuntooyinka caaga ah
Noocyada ugu fudud ee ka mid ah kuwa xayiraadda laga jaro ayaa laga samayn karaa dhalo caadi ah oo caag ah oo leh gacanta oo ku xiran labada dhinac ee guriga.
Qodobka ugu muhiimsan ee soo saarista weelka noocan oo kale ah qaado dhalo adag oo aan jabin dhinacyada.
Qiyaas ahaan siddeed mitir oo kor udhaca hoose ee dhalada waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo dalool si loo xaqiijiyo in shimbiraha ay u dhow yihiin quudinta. Iyada oo gacan ka heleysa qaylo-dhaan ku saabsan xarkaha, xariiqdani si fudud ayaa loogu dhejiyaa shabaqa.
Bakeeriyeyaasha bunker waxaa mararka qaarkood loo yaqaan automatic. Ilaa xad waa wax badan wuxuu kuu fududeynayaa inaad shaqeyso oo ka dhigaya habka quudinta quudinta shimbiraha si kaamil ah, tan iyo markii cunnooyinka qalalan ay madaxbannaaniddu ka timaaddo tuubada ilaa weelka marka la cuno.
Si aad tan u sameyso, qaado baaldi weyn oo caag ah oo lagu xakameynayo, iyada oo aan loo eegin waxa waxa lagu kaydiyay ilaa ilaa tan.
Qeybta hoose ee baaldi sida, waxaad u baahan tahay inaad yeelato meelo dhowr ah, iyada oo raashinka dambe lagu daadin doono qaybta taarikada qaybsan. Baaxadda, waa in ay ahaataa toban sintimitir oo ka sarraysa baaxadda baaldiga loo isticmaalo.
Haddii aysan jirin kaararka qaybinta, waxaad isticmaali kartaa baaldi weyn. Dhammaan qeybaha quudinta waxay u baahan yihiin in ay ku xidhaan naqshadaha. On top of baaldi aad u baahan tahay inaad xirto daboolka. Cunto noocan oo kale ah ayaa lagu ridi karaa dabaqa guriga, waxaadna ku dari kartaa ilaa labaatan santimitir dhul dabaq ah.
Jajabyada laga sameeyay tuubooyin bulaacada
Feeders nooca noocan oo kale ah ayaa daneyn weyn ku leh guryaha digaagga.
Qalabka soo socda ayaa loo isticmaalaa soo saarida nuucaan nooca nuujiyaha: Boorsada PVC ama PVC oo leh dhexroor qiyaastii 150 millimitir, laba jeex, hal mar, dhammaan qaybaha waa in ay ahaadaan wax isku mid ah.
Dhererka tubbada, mid kastaa wuxuu qaataa waxa uu doonayo. Dabcan, hadhuudh badan ayaa ku habboon tuubooyin dheer, laakiin tuubbo dhaadheer ma noqon doonto mid deggan.
Ka dib marka la go'aamiyo dhererka tuubooyinka, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo laba qaybood oo qiyaasaya labaatan iyo toban sintimitir. Kadibna gabal dhaadheer waxaa lagu dhejiyaa tuubooyinka oo leh fareem iyo hagaajinta godadka leh balaastikada.
Laga soo bilaabo laanboolka faleebka ku dhaji tuubbo yar oo tuubo ah oo loo isticmaali doono halkii saxanka. Dhammaan quudinta ayaa diyaar u ah, waxay ku sii jirtaa oo kaliya in ay ku shubto cuntada iyada oo ku soo lifaaqa derbi kasta oo guriga ah, oo leh dhamaadka wakhti dheer. Si aad u joojiso helitaanka hiddaha 'helitaanka cuntada habeenkii, godka waxaa lagu xirayaa fiilo.
Haddii aad leedahay digaag badan, waxaad samayn kartaa dhowr ka mid ah kuwan quudinta ah, ama samee quudin adag. Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo laba qaybood oo ka soo jeeda tuubada, mid ka mid ah waa inuu ahaadaa soddon sentimitir oo cabbirka.
Hadda waxaad u baahan tahay inaad labada qaybood ku xirto jilibkaaga. Qayb ka mid ah tuubbo yar oo tuubbo ah waxaad u baahan tahay inaad sameysid meelo yar oo cabbirka qiyaastii afar sentimitir. Iyada oo loo marayo godadka, shimbiraha ayaa cuni doona cuntada. Ugu dambeyntii waa lagama maarmaan in la xiro labadaba tubooyinka leh, iyo dhismaha ka sii adag ee naasku waa la sameeyaa.
Waxaa sidoo kale xiiso leh in laga akhriyo dabeecadda hoyga.
Qufac ka samaysan alwaax
Jajabyada ka samaysan qoryo waa qaali kuwa kor ku qoran.
Wixii soo saarista ee feederiyeyaasha alwaax waxay u baahan yihiin soo socda qalabka:
Plywood kula dhumucdiis derbiga qaro weyn
90 darajo darajo
Sawir ama jigsaw
Bandhiga ayaa arkay
Waxaan liiska ku qornaa sharaxaad ee soo saaridda ee feederiyeyaasha alwaax:
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad go'aansato cabbirka quudinta
On plywood qaro adag waxaa lagama maarmaan ah in la soo saaro dhammaan faahfaahinta feederiyaha.
Ka dib sawir, waxaad u baahan tahay inaad qaadato sawir ama jigsaw oo aad jarayso qaybaha.
Marka xigta, qaybaha cut-off-ka la lug leh, waxaad u baahan tahay inaad samayso godad qarsoodi ah si loo fuulo leh screws.
Ka dib markaa, waxaad u baahan tahay inaad xakameyso waraaqaha waraaqaha quudinta, si ay shimbiraha u waxyeeleeyaan naftooda.
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad isku xirto qalabka wax lagu dhejiyo, xargaha, horay, gadaal iyo dhinaca feederiyaha.
Dhabarka iyo xagga hore ee guddiga, waxaad u baahan tahay inaad jarayso xagasha 15 darajo kor iyo hoos. Marka xigta waxaad ubaahan tahay inaad ku rakibto qaybaha isla heerka isla meesha sare iyo isticmaalka furayaasha si aad ugu dhejisid qaybaha dhinaca. Waxaad sameyn kartaa derbiga hore ee caag ah, kaas oo kuu oggolaanaya inaad xakamayso heerka quudinta, adigoon furin daboolka.
Marka xigta waxaad u baahan tahay inaad qaadato gabal dhir ah oo ka dhig qaybta xagasha soddon-darajo oo ku dheji berkadaha.
Ka dibna isticimaal hingeska si aad ugu dhejisid daboolka dhinacyada. Taas ka dib, nuujiyaha la soo saaray waa in lagu daaweeyaa wakiilada daawada lidka ku ah.
Cunto qaadaha ka samaysan alwaax ayaa lagu sameyn karaa qaab sanduuq dheer ama sanduuq, kaas oo markaa la dhigo meel ka baxsan xuduudaha dayrka lugta, tan ilaalinta cuntada ka timid dhaawac. Markaad isticmaashid quudiyayaasha caynkaas ah, cagahaagu waxay noqon doonaan kuwo nadiif ah, maxaa yeelay uma baahnid inaad tagto shimbiraha.
Qoryaha waxaa laga qaadaa qaab shaxan ah oo lagu sameeyo sanduuq qiyaastii 25 sentimitir sare iyo qiyaastii 20 sentimitir oo ballaaran, ka dibna waxaa lagu dhejiyaa jilbaha ama boorsada. Hal darbi waa in laga dhigaa xagal.
Qiyaasta unugyada shabakada waa inay ahaato mid ka mid ah in gabadhu ay awood u leedahay inay madaxiisa xoqdo si ay cuntada ugu darsato. Qeybta sare ee quudinta ayaa lagu daboolaa daboolka laga sameeyay lafa-galka ama guddiga.
Samaynta foorno cabitaan shimbiro leh gacmahooda
Markaad dhiseysid cabitaan, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso dhibaatooyinka qaarkood ee aad u baahan tahay inaad ka takhalusto:
Suxuunta biyaha leh ee dabaqa ku taagan, si joogto ah u faddaroobaan.
Taangiyada waaweyn waa in aan lagu dhejin guriga, sida biyaha ku yaal iyaga oo si dhaqso ah u lumiya faa'iidadooda.
Shimbiraha dhulka ku jira ee cabaya hareeraha ayaa boodaya oo nadiifiya biyaha.
Bakteeriyadu iyo maadadaha microbes waxay si degdeg ah u muuqdaan dusha biyaha furan.
Biyaha kulul ee cabbitaannada noocan oo kale ah waa in la beddelo dhowr jeer maalintii.
Biyaha ku jira cabitaanka dabaqa ayaa jimicsi kara xilliga jiilaalka.
Sida loo sameeyo quudinta shimbiraha leh dhalada gacmahaaga
Maalmahan, khamriga tooska ah ee buuxiya shuruudaha waa mid caan ah. Laakiin beeralayda dabiiciga ahi waxay isticmaali karaan khamriga gacmahooda. Dunida oo dhan, dib u warshadaynta dhalooyinka caaga ah waa dhibaato weyn. Laakiin guryaha digaagga ee xirfadlayaasha ah waxay heleen isticmaalka dhalooyinkaas.
Dabcan, waxaad ku ridi kartaa baakadaha biyaha ee guriga, laakiin digaagga ma cabi karo oo kaliya biyo, laakiin sidoo kale xoqa halkaas, xitaa ka sii daran, ku jiraa halkaa. Beeraleyga caajiska ah ee caajiska ah ayaa si joogto ah u nadiifiya cabitaanadaas. Kuwa kalena waxay sameeyn doonaan khamrigaas oo kale oo loogu talagalay oo kaliya loogu talagalay in la cabbo.
Arrin muhiim ah waa tan biyihii ku jiray tuulooyinka had iyo jeer waa nadiif. Maadaama khamriga laga soocayo dhalooyinka caagga ah ay yihiin cabitaanno furan, waxay la xiriiraan shimbiraha iyaga oo u maraya iyaga, taas oo macnaheedu yahay in shimbir xanuunka uu ku dhici karo mid caafimaad qaba.
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu cabo khamriga dhalooyinka, waxaan ka sheekeyn doonaa hal ka mid ah qodobkan.
Goobta ugu fiican ee cabitaanku waxay ku jirtaa derbiga, ma aha dhulka, sababtoo ah dheriyada ayaa si dhakhso ah u nadiifiya.
Waxaad samayn kartaa shey si aad u dhejisid dhalada derbiga, kaas oo dhalada ay fududaan doonto. Qaab-dhismeedka waxaa laga samayn karaa silig ama wareejin loogu talagalay qalalan, halka dhalada ay noqon doonto. Qaybta hoose ee qoorta waa inay ka hooseysaa dhinaca weelka, sababtoo ah biyuhu ma buuxin doonaan. Taasi waa dhammaan quudinta shimbiruhu waa diyaar.
Sida loo isticmaalo cabitaankan? Si aad tan u samayso, qaado dhalada, ku buuxi biyo, daboolka daboolka, u rog kuna soo geli qaabka. Ka dib markaa, waxaad u baahan tahay inaad furto daboolka.
Biyaha ayaa bilaabi doona inay ku shubaan taangiyada, laakiin marka heerkulku gaadho qoorta, biyaha biyuhu ma sii daadin doonaan, sababtoo ah cadaadiska cimiladu wuxuu saameeynayaa biyaha taangiga waxana si habboon ugu haynaya dhalada. Markaa heerka biyuhu ka hooseeyaan qoorta, qadarka biyaha ee loo baahan yahay ayaa soo baxaya.
Si loo qalabeeyo guryaha digaaga ee khamriga, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo qadarka biyaha ee ay cunaan shimbiraha. Heerarkani waxay ku xiran yihiin da'da digaagga, heerkulka cuntada iyo hawada iyo waxyaabo kale.
Shimbiraha intooda badani waxay cunaan nus litir oo biyo ah maalintii. Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in shimbiraha aysan ku xirnayn hareeraha. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la cabbo khamriga sida shimbiraha ay ka soo jeedaan dhinac kasta.
Cabitaanka khamriga ee gacmahooda ku jira ayaa aad u caawin kara bilaabidda beeraleyda digaaga. Markaa kadib waxaad iibsan kartaa khamriga badan ee la cabo.
Ma aha ikhtiyaarka adag ee cabbitaanka niqiyeyaasha naftaada u samee
Si aad u sameysid cabitaan noocan oo kale ah ma noqon doonto mid adag iyo kharashaadka mugga.
Waa lagama maarmaan in la qaato caag balaastig ah oo dabool ah oo ka samaysan daloolka dhexroorka sagaal millimitir. Ibta naaska waa in lagu xoqo godka, ka dibna daboolka leh ibta caarada leh waa in lagu dhejiyaa dhalada.
Qeybta hoose ee dhalada waa in la gooyaa. Cabbitaanka dhameystey waa in lagu xiraa guriga oo ka buuxsamo biyo. Kadibna daboolka si aad u hagaajiso laydhka iyo foornada biyaha microcell.
Sidoo kale, halkii dhalada, waxaad isticmaali kartaa baaldi ah oo aad ka dhigi karto meelo dhawr ah. Ka dibna wax walba u sameeya si aad u dhalo.